Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Muqdisho Lagu Weeraray. – Calamada.com
Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Muqdisho Lagu Weeraray.
calamada December 12, 2016 1 min read
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen mid ka mid ah isbaarooyinka maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka dhigteen gudaha magaalada Muqdisho.
Isbaarada sida gaarka ah ciidamada Shabaabul Mujaahidiin u weerareen ayaa ah isbaarada Biyo dega xaafada Suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho’waxaa goobta isbaarada ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dagaalka’isbaarada la weeraray ayaa ka mid ah isbaarooyinka ay dhigatay dowlada Federaalka gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo si aad ah ay ugu dhib qabaan dadka iyo gaadiidka.
Maalintii shalay ayeey aheed markii camaliyad Istish-haadi ah oo dowlada federaalka looga dilay inka badan 40 ruuxÂ oo isugu jirta saraakiil iyo askar ay ka dhacday saldhig ciidan oo kasoo horjeeda dekeda Muqdisho.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 13-03-1438 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhurnimo Ee Idaacadda Islaamiga Andalus 13.03.1438 Hijri.